लक्ष्यमा अडिग रहुनहोस्, बरालिनु भएन भने सफलता अवस्य मिल्नेछ - वकील अजय शर्मा (मेल्बर्न) - eNepal
by Manoj Poudyal २०७८, २९ जेष्ठ शनिबार 655
अजय शर्मा (ढकाल) भर्खरै मात्र भिक्टोरियाको सर्वोच्च अदालतको एक रजिस्टर्ड वकीलको रुपमा आफूलाई दर्ता गराउन सफल हुनुभएको छ।निरन्तरको प्रयास अनि लगनशिलता र दृड सङ्कल्पले आज सर्वोच्च अदालतको वकील जस्तो गरिमामय तहमा पुग्ने थोरै नेपालीहरु मध्यका एक हुनुहुन्छ। हाल वहाँ मेल्बर्न स्थित गोथाने लयर्समा immigration र family law मा कार्यरत हुनुहुन्छ।हामीले उहाँलाई केही प्रश्न सोध्ने प्रयास गरेका थियौ जसले गर्दा कानुन बिषय पढ्न चाहानेहरू अनि यहि बिषयलाई पेशा बनाउन चाहाने कैयौ बिधार्थीहरुको लागि मार्गदर्शक बन्न सकोस्।
तपाईको थोरै पृस्ठभुमीको बारे बताइ दिनुहोस् न?
मेरो घर नेपाल हो तर मैले आफ्नो बालयकाल देखी ब्याच्लर सम्मको अध्ययन भारतको नयाँ दिल्लीमा गरेको हुँ।
कानुन बिषयनै किन आफ्नो करियरको बिषय रोज्नु भयो?
मैले मेरो बिधालय स्तरको पढाइ सकेपछि Bachelors of Commerce साथसाथै Company Secretary course जुन चार बर्षको थियो यसले मलाई Corporate अनि Good Corporate Governance मा अनुभव दियो।यहाँबाट मेरो इच्छा कानुन पढ्न तिर गयो।सन् २०१५ मा मेरो Company Secretary को कोर्ष सकिने बेला म एउटा इन्डिएन कर्पोरेटको लिगल डिपार्टमेन्टमा कार्यरत थिए।जब मेरो Company Secretary र Bachelors सकियो त्यसपछी मैले दिल्लीबाट नेपाल जाने निर्णय लिएँ। म आफु एक्लै परिवारलाई छोडेर नेपाल लागे र सन् २०१५ को नोभेम्बरमा नेपालको एक कानुन फर्ममा काम गर्न थाले।त्यो Law firm मा मैले वकिलसँग काम गर्ने अवसर पाएँ। यहि कारण मलाई वकिलको लाईसेन्स लिन एकदम जरुरत लाग्यो।सोही कम्पनीको हेडले पनि मलाई लासेन्स लिनको लागि अझ बढी प्रेरीत गर्नु भयो। मैले काम गर्ने कम्पनीको हेडको परिवार युके बस्नु हुन्थ्यो।यो कुराले पनि बिदेशमा गएर law को लाइसेन्स लिन बढी उकास्यो।
अस्ट्रेलीया आउने सोच किन आयो?
मैले अध्ययन गर्ने क्रममा थुप्रै देशहरुसँग दाँज्दा बस्न, खान र अन्तर्ररास्ट्रिय बिधार्थीहरुको लागि अस्ट्रेलीयानै सहज जस्तो लाग्यो। अर्को पाटो मेरो परिवारबाट बिदेशमा बसेर पढ्ने कोही नभएको ले पनि सायद मलाई यहि देश जान पर्छ भन्ने करकाप थिएन।जुन देशमा भएपनि आफ्नो लक्ष्य हाँसील गरेर सेटल हुनु थियो।
कति समय लाग्यो अस्ट्रेलीयाको वकील बन्न?
म ६ मार्च २०१७ मा अस्ट्रेलीयामा पाइला टेकेको हुँ र त्यसको चार बर्ष पछि ८ जुनमा २०२१ मा वकीलको लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुँ।
यो चार बर्षमा मैले आफ्नो Bachelors of law, Graduate diploma in legal practise अनि legal training सकाए।
यो अन्तरालमा यहाँसम्म पुग्नको लागी अरु बिधार्थीहरुले जस्तै उही लेभलमा काम गरे।यात्रा मुस्किल थियो तर असम्भव भने पक्कै थिएन। मलाई पनि कलेज कोर्ष साट्न उक्साउँथे तर मेरो सपना पुरा गर्नको लागी मैले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि नडग्मगाई लागि परे।साथीभाईहरुबाट आर्थीक तथा सामाजिक सहयोग राम्रो पाएँ।
आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न कतिको सहज रहेछ?
यस्ता धेरै रातहरु छन् जहा दिनभरी विश्व बिधालयमा हुन्थे अनि रातभरी कोठामा पढेर बिताएको छु।आज आएर मैले गरेको त्यो त्याग र मेरो लगनशिलताले गति लिएको देख्दा म आफुलाई खुसी भएको महसुस गर्दछु।
मेरो व्यक्तिगत र व्यावसायिक बृद्धि दुवैमा मलाई मार्गदर्शन गर्नु हुने मेरो सल्लाहकार टोनु गोथाने दाइ जसले मलाई मेरो लक्ष्यमा पुग्न पथप्रदर्शकको भुमिका खेल्नु भएको छ।
नयाँ बिधार्थी भाइबहिनीहरुलाई के भन्न चाहानु हुन्छ?
अन्त्यमा म सम्पुर्ण नेपाली लगाएत अन्तररास्ट्रिय बिधार्थीहरुलाई आफ्नो लक्ष्यमा सदैब लागि रहन अनुरोध गर्दछु।त्यो दिन अवस्य आउनेछ जहाँ हजुर आफुमा गर्व महसुस गर्नु हुनेछ। Your current situation is Not your permanent situation.